SIR CUSUB OO ASLI MAYDI IYO BARKHAD LEEYAHAY OO DADKA BEEYO GOOSATADA KA QARSOOON.War-bixin Yaxye Cawil Maxamuud.
Monday February 05, 2018 - 01:10:19 in Maqaallo by Super Admin
Waxba yaanan ku fogaanin gaadhigii NOAH da ahaa ee barkhad ciyaalka ka soo buuxiyey ee uu yiri ninkaas soo dila wasaarada dib u dejinta waaka joogee,
Markhaati ma doon bay ahayd waxii la kulmay noahdaas iyo nimankii uu so dirayba. ( CABAASE LAGII WAXII KA QABSADAY.............)
ASLI MAYDI sidaad ka dharag san tihiin waa shirkada ku carabaaban ka ganacsiga beeyada walaw ay jiraan tuhun daroogo oo balaadhan oo cid waliba oo ku uuman geyigan s/land.taasoo ay beeyadana ka gurata gobolka Sool, puntland iyo Buuraleyda gobolka sanaag khaasatan buuraha barakaysan ee calmadow iyo dhulal badan oo degaanka ah, sanado badan ayuu la macaamilaayey dadkan goosatada ah isagoo u bogay tayada iyo quruxda beeyada iyo aqoon la'aanta dadkan ka haysata manaafacaadkan ay ku fadhiyaan, iyo price ka reliable ka ah ee kaga gadanayaan isagoo dhoola cadayn darteed iskuna sii dhufsanaya qiimaha hadeeer ee 5$ dollar ah iyo ka 1200$ ee reer Europe hadhaw siisan doonaan.
Hadaba horaa loo dhahay( SIR MA QABE ALAA U SAHANA), waxay arintu saas ahaataba BARKHAD wuxu isku dayey inuu kaba maarmo deegaankan beeyada isagoo yagleelay inuu samaysto beer khaas ah isagoo sanadkì ina dhaafay 2017 isku dayey inuu beeyo ABQAAL ah oo 2gaadhi ah ka rarto deegaankan isagoo adeegsanaya rag ay xidid yihiin (ILMA QORI JARATO) ka dibna waa tii ceel af-weyn lagu xiray labadii baabuur,
Arinkaas markii baadhitaan qoto dheer lagu sameeyeyna isagay ku soo urutay
2015 ayay ahayed markii maareeyihii hore MARSADA BERBERA Eng: xoor xoor uu ogaaday in shirkadan asli maydi ee dekeda maraakiibta ka rarataa, ay drugs iyo cotrabaano khatar ka ah aduunka sida ( HEROINE AND COCAINE ) marka markabku gaadho badweynta midetrainianka ay groups sida drugskan ay halkaasi ku sii dhex qariyaan carafka iyo udgoonka beeyada si aan loo dareemin urteeda, warkaasna waxa maamulka dekeda soo siiyey nin somali ah oo SEAMAN ah oo markabkaa ula kala goosha marsooyinka aduunka,
Ka dib markii lagu war geliyey shirkada arinkan waxay heshiis iyo lacago tuhun saar ah wadaageen ina xoor xoor oo isna drugs kaas badh loo soo celin jiray ilaa ay banaysatay shirkadu.
Sababo la xiriira arimo siyasadedd iyo drugs iyo kootarabaanka ayaaba loo eryay Eng: xoor xoor .
Ka dib markii markii la soo magacaabay AXMED YOUSUF DIRIR) waxa u cuntami weyday in hawshii halkeedi ka socoto,waxayna xiriir sameeyeen C/SHAKUUR CIDIN oo maayirka ah, sidaad la socotiina maayirkan waxa sida fiinta uga qayliyey dadka reer berbera isagoo wada xaraashay dhulalkii danta guud ee dadweynaha, waxana uu ka caawiyey inay wada iibsadaan dhulka RAASIGA ah ee meel walba lagu hadal hayo ee dawladan cusubina DEKREETO ku hakisay welina lagu muran San yahay.
Layaabka kale ee dadku dhagta u taagayaa waa guryaha badan ee Asli maydi ka dhisato gobolada,
Taas ayaa cadayn kuu ah guryahan waxa loogu talo galay in lagu kala transfer gareeyo drugskan si aan dawlada ama policku aanay meel kaliya ugu soo hagaagin matalanba hadii sirtu garato,
Hargeisa 4 Guri oo afarta jaho ku yaal ayey leedahay,
Berbera 2Guri iyo Fooq dabaq ah iyo Hangaro dhismahoodu socdaa ka dhisan waa maxay ujeedku isweydii?
Burco 2 bakhaar iyo 2 guri ayaa ku yaal waa maxay u jeedku bal is weydii?
Ceerigabo iyo laascaanod waa sidaas isweydii?
Wajaalana hadaa laga wadaa,
Jawaabtuna waa si aan meel loogu soo hagaagin drugskan goboladana loogu kala miileeyo.
Sidaad ogtihiin aduunka miyaad aragteen shirkad habeenkii kaliya shaqeeysa,
Maqribka ayey shaqada bilowdaa ilaa 6da subaxnimo waa maxay u jeedku?
Wax walba waa cad yihiin.
Shirkadan asli maydi waxay ku darsatay waxyaabahaas an kor ku soo xusnay dadkii deegaanada ayey kala geysay oo reero dhan inuu CAAY IYO CEEB U JEEDIYO, xogtaasna uu ila wadaagay iigana sheekeeyey dadka kuu neceb yahay iyo kuu haysto,
What'sappka ayaanu ku wadaagnay barkhad waxyaalo aan bini adamka ka suur toobin in bulsho lagu dhahaa,
CADAYNTOODA WAXAN IDIINKU SOO QAADAY SCREEN SHOT NUMBERKA SOO DIRAYNA EEGA ZAADKA KA EEGA MAGACA KU QORAN,
WAXAN IDIINKU TALO GALAY INAAN IDIN TUHUN SAARO.
WAXII NA DHEX MARAY.WALAAHI WAAN HAYN KARI WAAYEY, MARKUU ANIGAYGII SIRTIISA HAYEY WEERER MAANTA II SOO DIRAY.
Hadii ay maxakamad tagayso walahi diyaar baan u ahay cidii rabta inay ka fal celiso arinkan.
Shirkadan fashilantay waxa ka hawl gala shaqaale kala duwan sida dadka.
1. qaar u adeegsatay difaac lagu nusqaamiyo dadka beeyo goosatada ah beeyadodana sixirkeeda bakhsa.
2. Qaar amaan iyo duco la daba taagnaada shirkadan fashilantay
3. Qaar cuqaal isku sheeg ah oo koofiyadooda ku ilaashada shirkada si aanay caaqil kale ugu soo ciyaarsiin.
4. Dhalinyaro nolosha gees iskaga tuuray ama ka dhacay oo uu meheradaha lagu qayilo uu ku quudiyo.
5. Dhalinyaro 30-40 jir u dhaxeeya oo uu u dhegadhegeeya waxyaabaha warbaahinta iyo novelska iyo Gazetteka loo mariyo.
6. Qaar u magacaaban inay shabakada face booka ka difaacaga.
Waxaan beeyaysatada u sheegayaa inay
Shirkadan fashilantay go'aan ka gaadhaan.